मनोरञ्जन | Indrenionline.com | Page 5
युनिक लिएर आए सानु
वैशाख २२ । विगत लामो समयदेखि गीत लेखनमा सक्रिय रहेका सानु तिवारीको ‘युनिक’ सार्वजनिक भएको छ । शुक्रबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजनागरि एल्वम सार्वजनिक गरिएको हो । एल्वममा एक धरको सिन्दुर…, जवानीमा…, भोजपुर जिल्ला…, सिमसिमलगायत पाँच गीत समावेश गरिएको छ । सवै गीतमा डीजराज पौडेलको स्वर र सङ्गीत रहेको छ भने सङ्गीत संयोजन रामकार्कीको । कलेक्सन एल्वममा गीतहरु लेखेका सानुको ...
“के यो मायाँ हो ” लिएर बजारमा आइन सरु
केशरमान बुढाथोकी दाङ २१ बैशाख । “साइँला मेरो साइँला चाँडै फर्की आउन” गीतको अपार सफलता पछि गायीका सरु गौतम ” के यो मायाँ हो ? “ बोलको गित लिएर बजारमा झुल्किएकिछिन । दर्जनौं गीति एल्बम हरु लिएर नेपाली सांगीतिक फाँट मा उदाएकी गायीका सरु गौतम सुगम संगीतकी पर्याय हुन् । लोक तथा आधुनिक गायनमा दक्खल राख्ने सरुको ” के यो ...
कोदोको पानी पिउँदै क्रिस्टिनालाई कसले फकायो ? ( भिडियो )
दर्जनौं हिट म्यूजिक भिडियोहरु पस्किसकेका निर्देशक रोजल थापाले गायकको रुपमा पनि आफ्नो परिचय थपेका छन् । हालैमा युट्युबमार्फत सार्वजनिक भएको “चिरिप्पै तानी कोदोको पानी फकाउला सानीलाई” बोलको गीतमा निर्देशक रोजलकै शब्द, संगीत र स्वर रहेको छ । क्रिस्टिना थापाको प्रेममा चुर्लुम्मै डुबेका मोडल दिव्य दाहाललाई मदिरा सेवन गर्ने बानी हुन्छ । क्रिस्टिनालाई यो बानी पटक्कै मन पर्दैन् । यसैबीच क्रिस्टिना ...
३५ बर्षपछि सेक्स गर्दा कति फाइदा कति वेफाइदा ?
मानिसको उमेरमा हुने बृद्धिसँगै एउटा अवस्थामा पुगेर मष्तिष्कका कोषहरु निष्क्रिय हुने क्रम शुरु हुन्छ । वैज्ञानिक तथ्य अनुसार, ३५ वर्ष पुगेपछि हरेक दिन ७ हजार मष्तिष्क कोषहरु क्षय हुने गर्दछन् । नियमित व्यायाम, शरीरमा खानपीन र मांशपेशीको गतिमा नियन्त्रणले यस्ता कोष मर्ने क्रमलाई कम गर्न सकिने वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । यसका ला िसबैभन्दा उत्तम भनेको नियमित यौन सम्पर्क रहने उनीहरुले ...
गायिका मिङ्स लामाको ‘डम्फु’ सार्वजनिक
२९ चैत । गायिका मिङ्स लामा पछिल्लो समय चर्चामा छिन् । हालै मात्र ूडम्फुू बोलको गीतको म्यूजिक भिडियो तयार भएको छ । यस गीतको शब्द तथा संगीत सुसान लामा गरेका छन । पासाङ योञ्जनको निर्देशनमा तयार भएको भिडियो लाई ज्ञानेन्द्र शर्माको छायांकन र प्रबिण श्रेष्ठले सम्पादन गरेका छन् । यो भिडियोमा सोनाम पाख्र्रिन र रोहनी लामा अभिनय रहेको छ । ...
माग्नेलाई दीपकले भने–‘यो मेरो एटीएम कार्ड हो’
२८ चैत । हाँस्य कलाकार केदार घिमिरेको ४३ औँ जन्मदिन रेडियो अडियोको प्रागंणमा मनाएका छन् । उनको जन्मदिन विशेष कार्यक्रममा निर्देशक दीपा श्री निरौला, दीपकराज गिरी, जितु नेपाल, शिवहरी पौड्याल, किरण केसी, निर्देशक विकास राज आचार्य, केदारकी श्रीमती सीता घिमिरे, लगायतको उपस्थिति रह्यो । उपस्थित सबैले केदारलाई सु–स्वास्थ्य र दिर्घायुको कामना गर्दै जन्मदिनको शुभकामना दिए । शुभकामना दिनुभन्दा दीपकराज गिरीले ...
अशोक मुकारुङको सानु हप्ताकै टप टुमा
काठमाडौँ, २६ चैत्र । करिब दुई साताअघि मात्रै आफ्नो चौथो गीति एल्बम ‘झुल्केको घाम’ सार्वजनिक गरेका गायक अशोक मुकारुङ भाग्यमानी गायक सावित भएका छन् । उनको ‘झुम्के फुली लाएर कता हो नि सानु’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियो युट्युबमा अत्यधिक हेरिएको भिडियो मध्ये दुई नम्बर सूचीमा परेपछि उनी भाग्यमानी गायक ठहरिएका हुन् । स्व. गायक तथा सङ्गीतकार खेमराज गुरुङको रचना तथा ...
मिष्टर हिमालय राष्ट्रिय खुल्ला शारीरिक सुगठन प्रतियोगिता तयारी पुरा
काठमाडौं, २४ चैत । नेपाल शारीरिक सुगठन तथा फिटनेस संघले आयोजना गर्न लागेको छैठौं मिष्टर हिमालय राष्ट्रिय खुल्ला शारीरिक सुगठन प्रतियोगिता एवं प्रथम पुरुष फिटनेस तथा महिला एथलेटिक्स फिजिक्स९२०७३ ० को तयारीको पुरा भएको छ ्र संघले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै चैत्र २५ र २६ गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषदस्थित कभर्ड हलमा हुने प्रतियोगिताको अन्तिम तयारी भएको जानकारी दिएको हो । ...
झरणा थापालाई हेर्न दर्शक भिड
शंकर केसी सल्यान, २४ चैत । चर्चीत नायीका झरणा थापाले विहिबार सल्यानमा ‘लुहाम बजार प्रथम महोत्सव, कृषि प्रदर्शनी तथा पर्यटकिय व्यापार मेला २०७३’ को सातौं दिन दर्शकहरुलाई भरपूर मनोरञ्जन प्रदान गरेकी छिन् । नेपाली चलचीत्र क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाएर धेरैको मनमा बस्न सफल झरणा थापा सल्यान लुहाम महोत्सवमा हजारौँ दर्शकहरुको साथ पाउन सफल भइन् । गत चैत्र १८ गते देखि ...
खाँदबारीमा परम्परागत लोकनृत्य चर्चा
खाँदबारी, १५ चैत । पूर्वी पहाडी जिल्ला सङ्खुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीमा एकै स्थानमा हिमाल, पहाड र तराईका लोकनृत्यहरू प्रस्तुत गरिएको छ । नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कार्यक्रममा ती नृत्यहरू प्रस्तुत गरिएका हुन् । कार्यक्रममा सङ्खुवासभाका कलाकारहरूले हिमाल, पहाड र तराईमा बसोबास गर्ने आदिवासी, जनजातिका परम्परागत लोकनृत्यहरू देखाएका थिए । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज जोशीले हिमाल, पहाड ...